Shiinaha post_title% warshad iyo soosaarayaasha | Amho
Maaddada ： Aan tolmo wanaagsan lahayn
Xaqiijinta Filter: 10 ~ 60μm
Xaaladda ： Cusub
Qaab dhismeedka: Roll
Lambarka Moodalka AMPT
Waxyaabaha Aan tolmo wanaagsan lahayn
Midabka Laheli Karo cad
MOQ 10 duub
Adeegga QEM Waa la habeyn karaa
Xirxirida Kiiska Plywood ama xirxiraan dabacsan
Lacag bixinta Midowga reer galbeedka, Lacagta gram, Paypal ,, Wareejinta siligga.
Maraakiibta Bad ahaan.Waxay ku socotaa hawada
Waqtiga dirida 15 maalmood gudahood kadib bixintaada.
Codsiga: Codsi Macaamiil aan caadi ahayn
Sifeeyaha qaboojiyaha, miiraha durm ee daaweynta biyaha.
Waxyaabaha aan tolmo lahayn ayaa kufiican codsiyada sifeynta qaboojiyaha sababtoo ah xooggeeda qoyan oo aan caadi ahayn, miisaan fudud, iska caabin kiimikaad oo wanaagsan, iyo qiime jaban Filterska harooyinka waawayn ayaa hormood ka noqday adeegsiga dhar aan tolmo lahayn oo loogu talagay shaandhada qaboojiyaha waxaanan leenahay khibrad farsamo oo aan ku dooran karno dharka saxda ah ee arjigaaga. Waxaan ku takhasusay non-tolid sifeynta qaboojiyaha waxaanna ku siineynaa tiro aad u tiro badan oo cudbi ah, rayon, iyo fiilooyin isku dhafan oo noocyo kala duwan oo ballac ah iyo dherer ah leh. Waxyaabaha aan bixinno waxaa ka mid ah dhammaan noocyada gelinta caadiga ah, ballacyo gaar ah, iyo dhererro duudduuban.
Iyada oo qalabkeena jeexjeexa iyo dib u-cusboonaynta guriga, waxaan ku samayn karnaa si dhakhso leh nooc kastoo darajo ama tiro ah. Waxaan ku siin karnaa Nylon, Spunbond Polypropylene, Spunbond Polyester, Rayon, iyo kuwa kale oo aan tolmo lahayn oo ku duuban duub, xaashiyo, wareegyo, boorsooyin, ama qaab kale oo dhimanaya ama qaab aad u baahan tahay.
S: Waa maxay faa'iidooyinkaagu?
J: Waxaan ka dhigi doonaa faahfaahin kasta oo kaamil ah.Waxaan kaliya siineynaa badeecad tayo sare leh, koox xirfadlayaal ah ayaa si daacad ah ugu adeegi doona adeegaaga wakhti kasta.Dhibaatooyinkaaga oo dhan waxaa lagu xallin lahaa si hufan.
S: Ma waxaad tahay wax soo saar ama qaybiyaha?
J: Waxaan nahay waxsoosaar iyo sidoo kale shirkad ganacsi, markaa waan hubin karnaa, si aan kaaga caawino inaad soo iibsato alaabooyin kale adoo awood u leh awooddeena ganacsi.
S: Ma noo soo diri kartaa muunado tijaabo ah?
J: Haa, shaybaarrada tiro yar ayaa lacag la’aan noqon doona, laakiin xamuulka waa in horay loo sii bixiyaa ama xamuulka la qaadaa, tayada alaabada aad soo iibsaneyso waxay la mid noqon doontaa ta shaybaarka.
S: Waa maxay shuruudaha lacag-bixintaada?
: T / T, L / C at aragtida. Western Union wixii lacag bixin ah sidoo kale waa la heli karaa haddii ay kugu habboon tahay.
A: 3-7 maalmood gudahood alaabada alaabada, 10-25 maalmood ee alaabooyinka loo habeeyay ka dib marka la helo lacagta hore.
S: Sidee ayaad u xirataa wanaagga?
J: Alaabta waxaa lagu xirayaa kiis alwaax ah si loo hubiyo amniga inta lagu jiro maraakiibta.
J: Haa, waxaan soo saari karnaa mashiinka oo leh astaantaada, astaantaada iwm.
Hore: Filtirka warqadda sariirta ah ee Flat, miiraha qaboojiyaha mashiinka wax shiidaya
Xiga: Qalabka Chip ee qalabka mashiinka